बजेटको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
बजेटको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार !
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधारका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको हो । काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्गका लागि १५ अर्ब, हुलाकी राजमार्गका लागि रु १३ अर्ब, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गका लागि १२ अर्ब २० करोड, रेलमार्गका लागि रु सात अर्ब, उत्तर–दक्षिण लोकमार्गका लागि रु पाँच अर्ब ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको छ ।
अब बन्ने सडक दुई लेन बढीको बनाइने बजेटको लक्ष्य छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमीकोटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सडक सञ्जालले जोड्ने बजेटको लक्ष्य छ । गल्छी–त्रिशूली–स्याफ्रबँेसी सडकका लागि रु एक अर्ब ५८ करोड विनियोजन भएको छ । कान्ति लोकपथ आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न र ९१ करोडको व्यवस्था भएको छ । बिपी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि ९६ करोड छुट्याइएको छ ।
चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ८१ करोडको व्यवस्था भएको छ । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङ मार्गका लागि रु छ अर्ब बजेट छ । तराई–मधेश क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रु चार अर्ब चार करोडको व्यवस्था छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २०० पुल निर्माणका लागि पाँच अर्बको बजेट विनियोजन भएको छ ।
सडक बोर्ड मार्फत् स्तरोन्नति एवं सुधारका लागि आठ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सडक सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले पेश गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी उत्तरी र दक्षिणी सीमा जोड्ने रेलमार्ग निर्माणलाई पनि मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा उच्च प्राथमिकता साथ अघि बढाइने भएको छ । जति उत्तर गयो त्यति नै बढी कठिन भूगोल भएकाले रेलमार्ग निर्माणमा समय भने लाग्ने छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको चिनियाँ पक्षले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेल मार्ग निर्माणका लागि सात अर्ब बजेटको व्यवस्था छ ।
यसैगरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ को आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।